ဆွီဒင် 2017 (2019) တွင်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေး - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
YBOP မှတ်ချက်များ - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းအပိုင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလည်းမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, နှင့်အရောင်းအဝယ်လိင်နဲ့အသင်းအဖွဲ့, တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်လည်းမြင့်မားတဲ့မျှော်မှန်းချက်များနှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ဘဝနှင့်အတူမကျေနပ်မှုများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ကိုပြသ။ အဲဒါကိုသာသက်ရောက်သည်သို့မဟုတ်မပါလျှင်တတိယမသိရပါဘူးနေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအကျိုးသက်ရောက်စေတော်မမူကြောင်းလူဦးရေသည်ပြည်နယ်များ၏ထက်ဝက်ခန့်မှာ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုမကျင့်စဉ်ယောက်ျား၏ခုနစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း, ညစ်ညမ်းလောင်
ညစ်ညမ်းကျယ်ပြန့်အခြေအတင်ဆွေးနွေးသည်နှင့်သုတေသနညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအနုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်နှစ်ဦးစလုံးအကြိုးဆကျကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းလိင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များလက်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဟုဆိုသည်။ သုတေသနကိုလည်းဥပမာအားဖြင့်, သဘောထားများ, အပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, အပေါ်မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု, ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားရန်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေဆီသို့ပိုပြီးလက်ခံသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိအမျိုးသမီးများနှင့်အထီးကြီးစိုးဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်မှုပါဝငျသောဖြစ်ကောင်းယနေ့ညစ်ညမ်းများ၏ content ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အများပြည်သူကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ, ဒီစစ်တမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလူတွေရဲ့လိင်ဘဝ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ, နှင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပဲ။
ရလဒ်များစွာသောမိန်းမအပေါင်းတို့နှင့်အသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျားထိုကဲ့သို့သော, သတင်းအချက်အလက်ရှာနေလိင်နှိုးဆွသောစာသားများဖတ်နေ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးမိတ်ဖက်ရှာနေအဖြစ်လိင်-related လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြသပါ။ အားလုံးနီးပါးလှုပ်ရှားမှုများအငယ်လူများနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူကျဆင်းခြင်းကြားတွင်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြသည်။ လူငယ်များကြားတွင်လိင်-related လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုအနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာမိန်းမတကာတို့ထက်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲဖို့အဟောင်းများလူတို့တွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပိုပြီးဘုံလူတို့တွင်မိန်းမတို့သည်အကြားထက်ဖြစ်ပြီး, ဒါကြောင့်သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အငယ်လူတို့တွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်မိန်းမတို့အဘို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပြီး, 72 ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းလောင်ဘယ်တော့မှနေချိန်မှာယောက်ျား၏ 68 ရာခိုင်နှုန်းစုစုပေါင်းသူတို့ညစ်ညမ်းလောင်ကသတင်းပို့သည်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအကြား link ကိုပိုပြီးအသိပညာများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ အရေးပါသောကြိုတင်ကာကွယ်အပိုင်းအစယောက်ျားလေးများနှင့်လုလင်တို့နှင့်အတူညစ်ညမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဆွေးနွေးရန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကျောင်းဒီလိုလုပ်ဖို့သဘာဝနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုအပေါ်ပညာရေး, လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးဆွီဒင်ရှိကျောင်းများအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လိင်ပညာရေးအလုံးစုံတို့အဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်အလုပ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လူဦးရေစစ်တမ်းကို SRHR ထံမှရလဒ်များ 2017
Published: အဆိုပါပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များကမေလ 28, 2019,
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်သည်ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိလိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများအတွင်းအမျိုးသားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဗဟုသုတတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဒေသတွင်းတိုးတက်မှုများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တာဝန်ယူသည်။ ၂၀၁၆ နွေရာသီတွင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အားလိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာလူ ဦး ရေအခြေပြုအမျိုးသားစစ်တမ်းလေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ယူခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကို SRHR2016 လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီး SCB နှင့်Enkätfabriken AB တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏လိင်ကျန်းမာရေးနှင့် HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးဌာနမှ ၂၀၁၇ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒါကထုတ်ဝေလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပါရှိသည်နှင့်အစီရင်ခံစာ၏ရည်ရွယ်ချက်အသိပညာတိုးပွားစေခြင်းနှင့်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက်ထိရောက်သောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအလုပ်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေများဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပျ, လျော်ကြေး, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအဖြစ်လိင်နှင့်တွဲပြီးပညာရေးဆန့်ကျင်လိင်ဆက်ဆံမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ, လိင်အသက်, လိင်, ဆက်ဆံရေးနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်, လိင်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရီနာကှငျးအကြောင်းကို updated အသိပညာပါဝင်သည်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်တချို့လမ်းအတွက် SRHR နှင့်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားအများပြည်သူအလုပ်လုပ်သူတွေကိုရည်ရွယ်သည်။ တာဝန်ရှိစီမံကိန်းမန်နေဂျာ Charlotte Deogan ခဲ့များနှင့်တာဝန်ရှိယူနစ်၏ဦးခေါင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးများအတွက်ယူနစ်, ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနမှာ Louise Mannheimer ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်, မေလ 2019
ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် SRHR အကြောင်းကိုနယူးအသိပညာ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်, ချေမှုန်းရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုလူမျိုး '' ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးဆန့်ကျင်လေးနက်ခြိမ်းခြောက်မှုများပါဝင်သည်။ သုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသည်မည်မျှဘုံပြသခဲ့သည်ကယူဆောင်လာများစွာကွဲပြားခြားနားသောအနုတ်လက္ခဏာကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုအဆိုးလူမျိုး 'ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, မျိုးဆက်ပွားနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးသက်ရောက်သည်။
SRHR2017 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုလူဦးရေအတွက်ဘုံဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ အမြိုးသမီးမြားကို ပို. မကြာခဏယောက်ျားထက်သားကောင်နေကြပြီး, လိင်တူချစ်သူပုဂ္ဂိုလ်များကိုပိုပြီးမကြာခဏယေဘုယျလူဦးရေထက်သားကောင်နေကြသည်။ အငယ်တစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းပိုပြီးမကြာခဏထိတွေ့လာအဟောင်းတစ်ဦးချင်းစီထက်ဖြစ်ကြသည်။
ဆွီဒင်ယောက်ျား၏ 42 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်အဖြစ်ဆွီဒင်အမျိုးသမီးနီးပါးတစ်ဝက် (9 ရာခိုင်နှုန်း), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်အကြောင်းမဲ့ပါပြီ။ 16-29 အသက်အမျိုးသမီးတွေတို့တွင်အချိုးအစားထက်ဝက် (57 ရာခိုင်နှုန်း) ထက်ပိုပါတယ်။ တိုင်းတတိယအမြိုးသမီးတ (39 ရာခိုင်နှုန်း) ထက်ပိုနီးပါးတိုင်းဒသမလူကို (9 ရာခိုင်နှုန်း) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအချို့ကိုပုံစံအကြောင်းမဲ့ပါပြီ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်နှင့်ဝသကဲ့သို့ ပို. 16-29 (55 ရာခိုင်နှုန်း) အသက်အမျိုးသမီးတွေ၏ထက်ဝက်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအချို့ကိုပုံစံ၏သားကောင်ဖြစ်ရပြီ။
အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏တစ်ရာခိုင်နှုန်း၏က Eleven ရာခိုင်နှုန်းကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုခြိမ်းခြောက်မှုမှတဆင့်ကြိုးစားခဲ့အဓမ္မပြုကျင့်မှု၏သားကောင်များဖြစ်ခဲ့ကြပါပြီ။ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့လူတွေကိုလိင်ကွဲထက်ပိုမိုမြင့်မားဒီဂရီဤကြုံတွေ့ခဲ့ကြနှင့်လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်တူချင်းယောက်ျား၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းအကြောင်းကို 10 ရာခိုင်နှုန်းကဒီအတွေ့ကြုံကြပါပြီ။
ကျောင်းနေပညာရေးဆိုင်ရာ၏အဆင့်အထိ related ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ အနိမ့်ပညာရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ကိုပိုပြီးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ရန်နှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အတူမိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအကြောင်းမဲ့နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားဘာသာဂုဏ်ထူးဖြစ်ကောင်းအကြောင်းကိုဗဟုသုတနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၏အသိအမြင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အနိမ့်ပညာရေးအဆင့်အထိနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ပိုမိုမြင့်မားပညာရေး Level ဖြင့်မိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုပြီးမကြာခဏလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုခြိမ်းခြောက်မှုအားဖြင့်ပြဌာန်းအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏သားကောင်များဖြစ်ကြသည်။
လူ့လိင်အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာသမာဓိနှင့်နွေးထွေးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤရွေ့ကားအလှည့်အတွက်, တခြားအရာအကြား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Self-လေးစားမှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုခချမ်းသာ, ငါတို့ခံနိုင်ရည်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ လူမျိုး '' လိင်ဘဝအတွေ့အကြုံများတိုင်းတာခြင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်က၎င်း၏အခက်အခဲများမရှိဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများကလူလိင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ transmit ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေကြပုံကိုမကြာခဏအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ လက်ရှိလေ့လာမှု SRHR အပေါ်ကျယ်ပြန့်အာရုံရှိပါတယ်နှင့်အခြားအမှုအရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါရလဒ်များဆွီဒင်လူဦးရေရဲ့အများစုအရေးကြီးသောလိင်ကိုရှာဖွေသူတို့၏လိင်ဘဝကိုကျေနပ်မှုဖြစ်ပြီး, အတိတ်တစ်နှစ်ကာလအတွင်းလိင်ဆက်ဆံဖူးကြောင်းပြသပါ။ (16-29 အသက်) (65-84 အသက်) အငယ်ဆုံးယောက်ျားနှင့်အသက်အကြီးဆုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအနည်းဆုံးကျေနပ်မှုရှိကြ၏။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကျားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါတယ်။ ဒါဟာမိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံဖက်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လူတို့တွင်ပိုပြီးအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလိင်သူတို့လိုလမ်းခဲ့ကြပါပြီမဟုတ်ရန်, အချိန်မတန်မီ orgasm ဖူးမှလူတို့တွင်လည်းပိုပြီးဘုံကြီးနှင့်ပိုပြီးလိင်မိတ်ဖက်ချင်ပါသည်။ ယောက်ျား၏တဆယ်ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းက erectile အလုပ်မဖြစ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အမျိုးသမီးများကပိုမကြာခဏလိင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်း, အနိမ့်လိင် drive ကို, အပျြောအပါး, လိင်စိတ်နိုးထမရှိခြင်း, လိင်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ပြီးနောက်နာကျင်မှုများနှင့် orgasm မရှိခြင်း၏ခံစားချက်များကိုမရှိခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
သိသိသာသာပိုပြီးအမျိုးသမီးတွေလည်းပင်ပန်းပါပြီသတင်းပို့သို့မဟုတ်လွန်းအထူးသဖြင့် 30-44 နှစ်ပေါင်းအသက် span အတွက်အတိတ်ကာလတစ်နှစ်ကာလအတွင်းလိင်ဆက်ဆံဖို့အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ လူဦးရေရဲ့ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုကျန်းမာရေးပြဿနာများသို့မဟုတ်အဆိုးသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုထိခိုက်ကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖော်ပြခဲ့သည်နှင့် 13 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှာကြလေသည်။
နောက်ထပ်လွှမ်းမိုးအချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လိင်အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ၏, အများစုသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုကျေနပ်မှုဖြစ်ခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ရိုးရိုးအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးသူတို့ကအခြားအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့လိင်ဘဝနှင့်အတူမကျေနပ်ခဲ့ကြကြောင်းမကြာခဏသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စတုထ္ထ trans ဆိုတဲ့နှင့်တိုင်းပဉ္စမရိုးရိုးလူကိုလိင်ဖူးဖို့မအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်။ အများစုမှာလိင်တူချစ်သူလူများနှင့်လိင်ကွဲ, အတိတ်နှစျတှငျလိင်ခဲ့ trans ဆိုတဲ့လူတွေတစ်ဦးကနိမ့်ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုကျေနပ်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့် 45-84 အသက် trans ဆိုတဲ့လူတွေအငယ်အသက်အုပ်စုများထက်ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရှိကြ၏။
အမျိုးသမီးများနှင့်၎င်းတို့၏လိင်အသက်တာ၏ယောက်ျားရဲ့အတှေ့အကွုံမြားကွာခြားနှင့်ခြားနားချက်များအများစုသည်မျိုးဆက်ပွားနှစ်တာကာလအတွင်းအသံထွက်ကြသည်။ နက်ရှိုင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပိုကောင်းသည်ဤကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်ရန်နှင့်ထိုအဆက်ဆံရေး, ဘုံအတွက်အသက်, လူရဲ့သုခချမ်းသာအပေါ်ရှိသည်နိုင်သောအရာကိုအကျိုးဆက်များအပေါ်အသိပညာတိုးတက်စေရန်လိုအပ်နေပါသည်။ လိင်နှင့် ပတ်သက်. ထောက်ခံမှုလိုအပ်ကြောင်းလက်လှမ်းနှင့်-oriented လိုအပ်ပါတယ်သတင်းအချက်အလက်, အကြံပေးခြင်းများနှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခံရဖို့သင့်၏။
သမာဓိရှိခွငျး, မိမိဆန္ဒအလျောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီခကျြကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေသည်။ တဦးတည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျော်အောင်အခမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းလူသားတစ်ဦးမှန်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ၏အယူအဆအခါ, ဘယ်လို, နှင့်လိင်ရှိသည်ဖို့ဘယ်သူကိုနှင့်အတူကိုကျော်အောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်၏တစ်ဦးချင်းရဲ့အမြင်ဖော်ပြသည်။
ရလဒ်, လိင်ရန်မပြောပါသူတို့လိင်ဆက်ဆံချင်ပုံကိုတစ်ဦးဖက်ဖို့အကြံပြုဖို့ဘယ်လိုသိနှင့်ပြောပုံကိုသိနိုငျသညျ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပဏာမယူအခမဲ့ခံစားရ, လူဦးရေရဲ့အများစုလိင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးသည်ထင်ကြောင်းပြသ အဘယ်သူမျှမပါလျှင်တစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံဖက်သူတို့လုပ်ချင်ကြဘူးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ခန့်မှန်းခြေတဝက်သည့်အခါအဘယ်မှာလိင်ရှိသည်ဖို့သူတို့နှင့်သူတို့၏အဖော်အညီအမျှမကြာခဏဆုံးဖြတ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူတို့သညျမိမိတို့၏မိတ်ဖက်ဘယ်မှာအခါလိင်ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်အစီရင်ခံရန်အဘို့အဒါဟာပိုပြီးအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကပိုကြီးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးများ, အမျိုးသားများနဲ့နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်အများဆုံးမကြာခဏ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစပျိုးယူအခမဲ့ခံစားရလိင်ဆက်ဆံရန်မပြောပုံကိုသိ, လိင်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုအကြံပြုဖို့ဘယ်လိုသိနှင့်လိင်အဖော်လုပ်လိုလျှင်အဘယ်သူမျှမပြောပုံကိုသိ သူတို့လုပ်ချင်ကြပါဘူးတစ်ခုခု။
တိုတောင်းပညာရေးနှင့်အတူယောက်ျားနိမ့်ပညာရေးအဆင့်အထိနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ဆက်ဆံရန်မပြောပိုမိုလွတ်လပ်သောခံစားရတယ်။ တက္ကသိုလ်ပညာရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လိင်ကိုရှာဖွေလိင်ပဏာမယူပုံကိုသိနှင့်ထို့ထက် ပို. မကြာခဏသူတို့လိင်ဆက်ဆံချင်ပုံကိုတစ်ဦးဖက်ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်လေ့ဖို့ပိုများပါတယ်။
အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဆွီဒင်အတွက်ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ကြောင်း, သူတို့အလိုတော်ဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စားသုံးရန်တစ်စုံတစ်ဦးကအတင်းမယ့်ရာဇဝတ်မှုပြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့မိမိဆန္ဒအလျောက်ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေသည်။ ဒါဟာလူငယ်တွေကိုသတင်းအချက်အလက်ပျံ့နှံ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ပြီး, ကျောင်းများတွင်ဒီအရေးပါသောနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်ကြသည်။ ကျောင်းများအစောပိုင်းအပေါ်တဦးတည်းကျင့်ဝတ်နှင့်အခြေခံလူ့တန်ဖိုးများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလောင်းတွေကျော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူသားအားလုံး၏ညာဘက်ဆှေးနှေးနိုငျတဲ့နရောဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်အပေါ်မှီခိုသောကွောငျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်သဘောတူညီချက်ဥပမာဆက်စပ်နှင့်လူများပါဝင်ပတ်သက်, အလေ့အကျင့်အတွက်ကိုင်တွယ်ရန်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းကွဲပြားခြားနားသောကျန်းမာရေးရလဒ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ တူညီသောအစိုးရတာဝန်ကျရာမှာတော့လေ့လာမှု "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, ခွင့်ပြုချက်နှင့်ကျန်းမာရေး" ဟုအဆိုပါ Novus Sverigepanel မှတဆင့်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် 12,000 သင်တန်းသားများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ရလဒ်လူအများစုသူတို့နှင့်မည်သို့သူတို့လိုချင်တဲ့သို့မဟုတ်လိင်ရှိသည်ဖို့မလိုချင်ကြပါလျှင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအစီရင်ခံကြောင်းပြသပါ။ အမျိုးသမီးများ, အငယ်ကလူနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့သူတွေကိုပိုပြီးမကြာခဏဒီကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ဖို့အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတွေနှုတ်ဖြင့်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားနှင့်မျက်လုံးချင်းနှင့်အတူရှိကြ၏။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအခြားအမှုအရာတို့ကိုအကြားကျား, မ, ပညာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာအခြေအနေ, အပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြား။
ဖြေဆိုသူသုံးပုံတစ်ပုံဟာသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုသူတို့ရဲ့သာယာဝပြောရေးကိုထိခိုက်မထင်ပါတယ်။ တဦးတည်းလေးပုံတပုံဟာသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုသူတို့ကိုပိုကောင်းခံစားရပါစေဟုခံစားရနှင့်အခြားလေးပုံတပုံကဤကျွမ်းကျင်မှုသူတို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံဟုခံစားရပါစေဖော်ပြခဲ့သည်။ တဦးတည်းဒသမ၎င်းတို့၏ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်မလုံခြုံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်အလေးပေးခံစားရတယ်။
Novus စစ်တမ်းအရအမျိုးသမီး ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသား ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအမှန်တကယ်မလိုချင်ကြသော်လည်းလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ လိုက်နာရန်အကြောင်းပြချက်များမှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်၊ ဆက်ဆံရေးအတွက်သို့မဟုတ်မျှော်လင့်ချက်များကြောင့်ထိုသို့ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ လိင်ကွဲပြားမှုရှိသည့်အမျိုးသမီးများသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုမကြာခဏလိုက်နာလေ့ရှိပြီးလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လို။ မရပါ။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူများကိုလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအကြားတွင် ပိုမို၍ တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ယောက်ျားကသူတို့လိင်ရှိသည်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်အချို့လမ်းများတွင်လိင်ရှိသည်ဖို့လိင်ဆက်ဆံလိုက်နာရန်, ဒါမှမဟုတ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလိင်အဆုံးသတ်ချင်ကြဘူးကြောင်းမလိုချင်ကြဘူးကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့သက်ဆိုင်ရာခဲ့မရှိသေးပေတစ် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိဖော်ပြထားသည်။
ရလဒ်ထို့ကြောင့်ဘယ်လိုတယောက်တယောက်လိုလားသောအရာကိုဆက်သွယ်နှင့်တဦးတည်းလိင်လိင်, ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေ, ကျောင်းနေပညာရေးဆိုင်ရာ, အသက်, လိင်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အခြေအနေကသူ့ဟာသူပေါ်မူတည်ရှိပါတယ်သောအခါအကျင့်ချင်ပါဘူးဖော်ပြသည်။ ပိုများသောအသိပညာအတူတကွထိုကဲ့သို့သော heteronormativity ကဲ့သို့သောအခြားပါဝါအဆောက်အဦများနှင့်အတူပုလ်နှင့်ဣတ္စံချိန်စံညွှန်းများကသက်ရောက်မှုဘယ်လောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအပေါ်လိုအပ်သည်။
ယောက်ျား၏နီးပါး 10 ရာခိုင်နှုန်းကိုလိင်များအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့ကြ
အရောင်းအဝယ်လိင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရရှိသွားတဲ့ရှိရာအခြေအနေကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောသည်, သို့မဟုတ်လိင်များအတွက်လဲလှယ်အတွက်လျော်ကြေးသို့မဟုတ်ငွေကြေးပြန်လည်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလျော်ကြေးငွေပိုက်ဆံ, အဝတ်, လက်ဆောင်, အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါး, ဒါမှမဟုတ်အိပ်ရာအရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ရောင်းမဟုတ်ပါဘူးစဉ် 1999 ကတည်းကကြောင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်လိင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ပေးဆောင်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းမှလိင်လဲလှယ်အတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကအဓိကအားဖြင့်အထီးဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါသည်ငွေကြေးပေးအပ်မည်။ နီးပါး 10 ယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်းသာ - ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့နည်းပါးလာထက်တစ်ရာခိုင်နှုန်း - အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာသာပေးချေရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာပြည်ပမှာလိင်များအတွက်ပေးဆောင်ကြဖို့ပိုဘုံကြီးနှင့်လိင်များအတွက်ပေးဆောင်သောလူတို့၏ 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ပမှာဒါကိုပြု၏။ မတူကွဲပြားခြားနားသောပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့်အတူလူတို့၏စပ်ကြားရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ လိင်တူယောက်ျားနဲ့ရိုးရိုးယောက်ျားကပိုမကြာခဏလိင်ကွဲယောက်ျား (နီးပါး 15 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 10 ရာခိုင်နှုန်း, အသီးသီး) ကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်များအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့ရသည်။
လိင်၏ဝယ် criminalizing လိင်များအတွက်ပေးဆောင်ဆီသို့ဦးတည်သဘောထားတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့တာအခါရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ။ ဤအသဘောထားတွေပြောင်းခြင်းအမျိုးသမီးအားနည်းချက်ကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းထောင့်ရှိဆောင်ရွက်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ကျားမတန်းတူရေးတို့အတွက်ကျယ်ပြန့်အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာများအတွက်ဝယ်လိုအားကိုလျော့ချဖို့အမျိုးသမီးတွေကိုဆန့်ကျင်ယောက်ျားရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်ရန်ခြုံငုံရည်မှန်းချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရလဒ်ကိုလည်းလိင်လဲလှယ်အတွက်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရန်ရှားပါးကြောင်းပြသပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကလိင်တူချစ်သူလူတို့တွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးများနှင့်ဒါပြည်ပမှာလုပ်ဖို့ထက်ယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးအကြားဆွီဒင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာသာလဲလှယ်အတွက်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရန်လည်းပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာသာလဲလှယ်အတွက်ငွေပေးချေမှုလက်ခံများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ ကာကွယ်တားဆီးရေးထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်သူ့အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လုပ်ရပ်များသည်ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ သက်ဆိုင်ရာသူများသည်မသက်ဆိုင်လိင်သို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ၏လူမှုရေးအထောက်အပံ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းသောအားပေးကြောင်းလူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုကမ်းလှမ်းရပါမည်။
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး: contraceptives အပေါ်ရလဒ်များကို, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ, ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ, ကလေးများ, နှင့်ကလေးပေးပို့
မျိုးပွါးအသက်တာ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တားဆေးအသုံးပြုခြင်းကို, ကလေးငယ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ဝန်, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ, ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း, ကလေးကပေးပို့အဖြစ်မျိုးပွားမှုအတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်. အတှေးအကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့်လည်းနီးကပ်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, နှင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ရလဒ်အသက်အနည်းငယ်သာအမျိုးသမီးတွေကို 16-29 နိမ့်ဝင်ငွေအဖြစ်နိမ့်ပညာရေးရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားအကြားအတူမိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားဝင်ငွေနှင့်အတူသူတွေထဲမှာကလေးမွေးဖွား-ထိန်းချုပ်မှုဆေးပြားကိုအသုံးပြုပါကဖော်ပြသည်။ အသုံးပြုမှုအတွက်ကွဲပြားမှုဖြစ်နိုင်အသိပညာနှင့်ဟော်မုန်းနှင့်၎င်းတို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုကွောကျရှံ့ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးအမြိုးသမီးမြား၏တတိယသူတို့အနည်းဆုံးကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့ကြသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်အချိုးအစားအဖြစ်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ပျက်ကျကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူရာခိုင်နှုန်း, အ 1970s ကတည်းကမပြောင်းလဲကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကလေးကပေးပို့အကြောင်းကိုသတင်းပို့တဲ့အခါမှာ 26 ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအခိုင်အမာပြောပါတယ်, 17 ရာခိုင်နှုန်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, 14 ရာခိုင်နှုန်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအကျိုးဆက်များအသက်အရွယ်နှင့်ကျောင်းနေပညာရေးဆိုင်ရာပေါ် မူတည်. ကွာခြား။ သူတို့ရဲ့သူငယ်၏ပေးပို့စဉ်အတွင်းပါဝင်အပေါင်းအဖေါ်များကိုလည်းအငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိပေမယ့်, လိင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခြင်း, ခံခဲ့ရသည်။4ရာခိုင်နှုန်းစအို sphincter (တန်း3သို့မဟုတ် 4) ပတျသကျတဲ့ကှဲထှကျခဲ့စဉ်ကလေးသည်ပေးပို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအမျိုးသမီးအများစုတစ်ခု episiotomy တစ်ခုသို့မဟုတ်အလိုအလျောက် laceration ခဲ့လေသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တဦးတည်းဒသမပေးပို့ ဆက်စပ်. အတွက် episiotomy သို့မဟုတ်အလိုအလျောက် lacerations နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများအတွက်စောင့်ရှောက်မှုရှာကြလေသည်။ ကိုမအသက်အရွယ်, ပညာရေးအဆင့်ကို, မဝင်ငွေစောင့်ရှောက်မှုသို့မဟုတ်ကလေးကဖြန့်ဝေရန်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ၏ရှာသို့မဟုတ်လက်ခံထိခိုက်ခဲ့သည်။
လူအများစုဟာသူတို့အောက်ပိုင်းပညာရေးနှင့်အတူယောက်ျား မှလွဲ. , သူတို့ကချင်သောကလေးအရေအတွက်ရှိသည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အားလုံးအသက်အရွယ်ကွင်းခတ်ထဲမှာ5ရာခိုင်နှုန်းကိုကလေးများမလိုချင်ကြဘူးသော်လည်းသုံးရာခိုင်နှုန်း, involuntarily သားမရှိဘဲဖြစ်ကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်7မှ 30 အသက်နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ 84 ရာခိုင်နှုန်းချို့တဲ့ခြင်းမရှိဘဲမိဘများဖြစ်လာကြပါပြီ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ SRHR2017 ဆွီဒင်တွင်အမျိုးသမီးများအကြား contraceptives ၏အသုံးပြုမှုကိုအသက်အရွယ်နှင့်လိုအပ်ချက်ပေါ်တွင်ဒါပေမယ့်လည်းဝင်ငွေနှင့်ပညာရေးအဆင့်ကိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ဝန်, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ, ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း, ကလေးကပေးပို့အဖြစ်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများထိုကဲ့သို့သောအသက်, ဝင်ငွေ, ပညာရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဒေသအဖြစ်အချက်များတစ်အကွာအဝေးပေါ် မူတည်. ခြားနားသည်။ ပိုပြီး variable တွေကိုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များအပေါ်ထပ်မံအသိပညာအကောင်းဆုံးမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအတွက်မတရားမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအကြောင်းကိုသွားကြဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
SRHR - ကျား, မတန်းတူရေးနှင့်သာတူညီမျှ၏ပြဿနာ
SRHR2017 လူဦးရေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပြသခဲ့သည်။ စစ်တမ်းများတွင်အားလုံးနီးပါးမေးခွန်းများ၏အဖြေများကိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြားကွဲပြားနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးကျား, မကွဲပြားမှုအဘို့မြင်ကြခဲ့ကြသည်:
ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောကျား, မခွအေနမြေားကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ထို့ပြင်ရလဒ်မိန်းမတကာတို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်အားနည်းချက်, အသက်ပျိုသောလူ, Non-လိင်ကွဲနှင့် trans ဆိုတဲ့လူများနှင့်အနိမ့်ဝင်ငွေနှင့်ပညာရေးနှင့်အတူလူတို့တွင်အချို့ဒီဂရီမှပြသပါ။
လူဦးရေရဲ့တစ်ဦးကအများစုသင်တန်းတစ်ခုအပြုသဘောရလဒ်တည်းဟူသောကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လိင်နှင့်လူရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအကြား, တစ်ခါတစ်ရံ, အများကြီးကွာခြား။ ဥပမာအားဖြင့်, အမြိုးသမီးမြားကို ပို. မကြာခဏယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အနိမ့်လိင် drive ကိုခံစားရသည်။ ယောက်ျားလျော့နည်းမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံရန်မပြောအခမဲ့ခံစားရအဘယ်ကြောင့်ထပ်မံလေ့လာခဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လိင်ကွဲအတိုင်းအတာလူတွေကိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးမြင်သည်အတိုင်းသူတို့ဘဝအသက်ရှင်ဖို့အခမဲ့ခံစားရအရာကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့် ပတ်သက်. အားကောင်းတဲ့လိင်နှင့်လိင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကျားမအခန်းကဏ္ဍ, ဣတ္နှင့်ပုလ်နှင့် ပတ်သက်. စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းရှိပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်, ချေမှုန်းရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မည်ကဲ့သို့သောဤကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေအရေးပါသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အကျိုးဆက်များရုံသားကောင်တစ်ဦးချင်းစီကိုထိခိုက်မထင်သော်လည်း, သူတို့လည်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လောက်နဲ့ညီမျှများအတွက်အမှတ်အသားရှိပါသည်။
SRHR2017 ၏ရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးပိုပြီးဆွေးနွေးမှုများများအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ရှိပုံပေါ်နှင့်လိင်နှင့် ပတ်သက်. ထောက်ခံမှု, အကြံပေးခြင်း, နှင့်ပညာရေးအပေါ်လေ့လာဆန်းစစ်။ လူငယ်များငါတို့သည်လူငယ်ဆေးခန်းများနှင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများလည်းဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာသားဖွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာများရှိသည် - ပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်း - နှင့်အထက်လူဦးဟာသူတို့ရဲ့လိင်အသက်နှင့်လိင်နှင့် ပတ်သက်. အကူအညီကိုလက်ခံရရှိရန်ဖွင့်နိုင်မည့်အနည်းငယ်သောနေရာများရှိပါသည်။ အဲဒီမှာလည်းဖြစ်သောကြောင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်ယောက်ျား၏လိုအပ်မှု၏စနစ်တကျသည်ဤကြိုတင်ကာကွယ်အဖွဲ့အစည်းများစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း, အထူးသဖြင့်လူငယ်ဆေးခန်း, အကြံဉာဏ်ကိုဖြစ်တယ်, သူတို့ရဲ့လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောဂရုမစိုက်။ ကျွန်တော်တို့သည် contraceptives, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများအတွက်ကုသမှုနှင့်အထွေထွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုယောက်ျား၏မျိုးဆက်ပွားအခွင့်အရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကိုအလေးပေးနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမှယောက်ျားရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆွေးနွေးရှိခြင်းကလေးများလမ်းကြောင်းကိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
SRHR2017 တှငျကြှနျုပျတို့အမျိုးသမီးများနှင့်အသက်အရွယ်၏ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရီနာကှငျးကိုအသုံးပြုကြည့်ပါ။ လူငယ်တွေကအွန်လိုင်းကိုပိုပြီးတက်ကြွဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ၎င်းတို့စပ်ကြားကွဲပြားခြားနားမှုလူငယ်များအကြားတွင်အသေးဖြစ်ကြသည်။ UMO.se အွန်လိုင်းမှလူငယ်ဆေးခန်းများနှင့်အများအပြားနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အတူရောက်ရှိကြောင်းလမ်းအတွက်လိင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့ဥပမာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းများကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. ကျားမတန်းတူရေးနှင့်သာတူညီမျှတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးတို့အတွက်အရေးကြီးသောရီနာကှငျးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျောင်းများအတွက်လိင်ပညာရေး SRHR ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းနှင့်ကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်လိင်ပညာရေးထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, ဆက်ဆံရေးများနှင့်လိင်အဖြစ်ဥပဒေပြုခြင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများကဲ့သို့အခြေခံအဆောက်အဦးအမြင်များ, နှင့်တစ်ဦးချင်းအမြင်များနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းသားအားလုံးမှသတင်းအချက်အလက်ပေးကြသည်။ လေ့လာရေးကျောင်းသားများအတွက်လိင်ပညာရေးထိုကဲ့သို့သောသည်အခြားဘာသာရပ်များသို့ပေါင်းစည်းမှုအဖြစ်တိုးတက်မှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ပြီးသော်လည်းကျားမတန်းတူရေး, လိင်တူချစ်သူအမြင်များနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ထက်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်, ကိုယ်ဝန်နှင့်တားဆေးအသုံးပြုခြင်းကိုလက်ခံရရှိကြောင်းပြသပါ။ လိင်ပညာရေးနှင့်အတူတိုးတက်မှုအလုပ်ကျောင်းစစ်ဆေးရေး, ကျောင်းအာဏာပိုင်များထံမှတိုးတက်မှုများနှင့်ယူနက်စကိုနှင့် WHO ကဥရောပအနေဖြင့်လိင်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်အနေဖြင့်တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ထောက်ခံသည်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် SRHR - ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လို
ဆွီဒင်ဆွီဒင်ဥပဒေပြဌာန်း, ကုလသမဂ္ဂစည်းဝေးကြီးများနှင့်ထူထောင်ရေးမူဝါဒစာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်အခြေခံကျား-တန်းတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးရောက်ရှိဖို့တစ်မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ဆွီဒင်မှာလည်းအစီအစဉ် 2030 တွင်ထင်ဟပ်သောခိုင်ခံ့သောနိုင်ငံရေးသဘောတူညီမှုရှိပါတယ်။
လိင်ကျန်းမာရေးတစ်ခုပစ်မှတ်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလူမှုစီးပွားရေး, လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအချက်များလွှမ်းမိုးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြားဆက်စပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ လိင်နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကျန်းမာရေးနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်တွေအများအပြားသည်အခြားရှုထောင့်, အပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလူမှုရေးလိုအပ်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့လိင်သဘာကျော်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မျိုးပွား၏လူရဲ့လွတ်လပ်မှုနှင့်အသိများအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြပြီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းသောမျိုးဆက်ပွား, စိတ်ပိုင်း, နှင့်အထွေထွေကျန်းမာရေးရှိသည်ဖို့အမည်ရကြောင်း, SRHR ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုတင်နားလည်မှုအတည်ပြုပါ။ ကျား, မကွဲပြားမှုအဆောက်အဦများ, စံနှုန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဆင့်အထိနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်မျှော်လင့်ချက်များကြောင့်တည်ရှိနေ, ဤကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. လူတွေရဲ့လိင်အသက်, ဆက်သွယ်ရေး, ဆက်ဆံရေးနှင့်မိသားစုဘဝကိုထိခိုက်ကြောင်းပုံစံများဖန်တီးပေးပါတယ်။
အရေးပါသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်, ချေမှုန်းရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မည်သို့မည်ပုံဒီအဆိုးကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နှောင့်ယှက်, ချေမှုန်းရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ဖို့ရှိသည်။
ကျနော်တို့ကျားမတန်းတူရေးနှင့်သာတူညီမျှတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာကျား, မကြောင့်ကွဲပြားမှုအပေါ်ထပ်မံအသိပညာ, လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာလိုအပ်ပါတယ်။ များအတွက်အခြေအနေများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခွင့်အရေးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
SRHR အသိပညာနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်စေရန်အလုပ်လုပ်တယ်ထားတဲ့ဆွီဒင်၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ, ကနိုင်ငံတော်အဆင့်အပေါ်ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ အဆိုပါရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များများ၏စောင့်ကြည့်မှု, ဆှီဒငျကျားမတန်းတူညီမျှမှုမူဝါဒ, နှင့်အမျိုးသမီးဆန့်ကျင်ယောက်ျားရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုအဆုံးသတ်ဖို့မဟာဗျူဟာအတွက်, ဒီပစ္စည်းကနေ SRHR ကိစ္စရပ်များနှင့်တိကျသောပစ္စည်းများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အသိပညာဆွီဒင် SRHR ၏လယ်ပြင်အတွင်းထပ်မံပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုများအတွက် Starting Point သို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆွီဒင်၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီတစ်နိုင်ငံလုံး SRHR ကိုသြဒိနိတ်, အသိပညာတည်ဆောက်နှင့်ဆွီဒင် SRHR စောင့်ကြည့်။ အေဂျင်စီ SRHR အပေါ်တစ်ဦးလူဦးရေစစ်တမ်းကိုဖျော်ဖြေဖို့အတှကျအစိုးရရဲ့တာဝနျမြားနှငျ့ရညျရှယျအသိပညာတိုးပွားစေခြင်းနှင့်ဒါလုပ်နေသဖြင့်ဆွီဒင် SRHR များအတွက်ပိုကောင်းအခြေအနေများဖန်တီးရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
လိင်နှင့်ကျန်းမာရေးအကြားအဆိုပါ link ကိုယခင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ဆွီဒင် 1967 အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးလူဦးရေ-based လိင်စစ်တမ်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ပြင်ဆင်မှုဆယ်နှစ်ကြာပြီးနောက်, ဆွီဒင်၏ယခင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအင်စတီကျု 1996 အတွက်အစိုးရ, လေ့လာမှု "ဆွီဒင်နိုင်ငံအတွင်းလိင်" မှတာဝနျကိုပေါ်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုကမကြာခဏအကြီးအကျယ်ကြောင့်ခေါင်းစဉ်အပေါ်ကြီးမားသောလေ့လာချက်များ၏မရှိခြင်း, လိင်နှင့်ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုရည်မှတ်ကိုးကားထားသည်။
20 ကတည်းကအတိတ် 1996 ပေါင်းနှစ်အတွင်းမှာတော့အများအပြားအရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလွန်ပြီ။ အောက်ကအချိန်အညီကျနော်တို့ကဤလူ့အဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေးပြသပါ။ အကြီးမြတ်ဆုံးအပြောင်းအလဲများတချို့ကအင်တာနက်နိဒါန်း, လိင်တူချစ်သူလူတို့အဘို့တိုးတက်အခွင့်အရေးနှင့်လူများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများမိုဘိုင်းတိုးလာကြပါပြီအတူတကွတိုးပွားလာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်အတူဖြစ်သောအီးယူအတွက်ဆွီဒင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြသည်။
ပုံ 1 ။ 1996 ကတည်းက SRHR လယ်ပြင်၌ရှိသောအပြောင်းအလဲများအချို့နှင့်အတူအချိန်မျဉ်းတစ်ကြောင်း။
2017 အတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသောအခါ, SRHR အသစ်တစ်ခုအခြေအနေတွင်ပြုလေ၏။ ဤသည်, စံအသိအမြင်ကျားမတန်းတူရေးနှင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးထင်ရှားလိင်တူချစ်သူများအခွင့်အရေးတိုးတက်နှင့်သင်တန်း၏အင်တာနက်က။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် Guttmacher-Lancet ကော်မရှင် 2018 အတွက် SRHR များအတွက်ဦးစားပေးနဲ့နှံ့နှံ့စပ်စပ်နှင့်အထောက်အထားအခြေပြုအစီအစဉ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ SRHR ၎င်းတို့၏ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်:
လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးလိင်နှင့်မျိုးပွားရှိသမျှတို့ကိုရှုထောင့်မှနှိုင်းယှဉ်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုတစ်ပြည်နယ်မဟုတ်ဘဲရောဂါ, ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်အားနည်းခြင်းအဖြစ်၏မျှသာမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, လိင်နှင့်မျိုးပွားရန်အပြုသဘောချဉ်းကပ်မှု, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ခြုံငုံသုခချမ်းသာမြှင့်တင်ရန်အတွက်ယုံကြည်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပျြောမှေ့စလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအားဖြင့်ကစားအစိတ်အပိုင်းကိုအသိအမှတ်မပြုသင့်ပါတယ်။ အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့အလောင်းတွေအုပ်ချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန်နှင့်ညာဘက်ကိုထောက်ပံ့သောဝန်ဆောင်မှုများကိုဝင်ရောက်ဖို့တစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သမာဓိရှိ, privacy ကိုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလေးစားကြ
သတင်းအချက်အလက်သူတို့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းကျော်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်, သယံဇာတ, န်ဆောင်မှုများနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု, အကျပ်ကိုင်, ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း, အကြမ်းဖက်မှုကနေအထက်အခမဲ့အပေါငျးတို့သအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောပံ့ပိုးကူညီ
အစီအစဉ် 2030 ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များတိုးတက်လာသောကျားမတန်းတူရေးနှင့်သာတူညီမျှပေါ်နှင့်လူရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးခိုင်ခံ့စေအာရုံစိုက်ပါ။ အစီအစဉ် 2030 အတွက်ဂိုးအတော်များများ SRHR, ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဗွေဆော်ရည်မှန်းချက်အရေအတွက်ကို3နှင့်ကျားမတန်းတူရေးနှင့်အားလုံးအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးငယ်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသက်အရွယ်နှင့်ရည်မှန်းချက်အရေအတွက်ကို5များအတွက်ကောင်းစွာ-ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် SRHR ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအောက်ပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖြစ်ခြင်းမှဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြီးအကျား, မကွဲပြားမှုများနှင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များဖို့အကြီးအကျယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ SRHR ၏အဓိပ္ပါယ်အမျိုးသမီးများ, ကလေးများ, နှင့်လူငယ်လူကြီးများကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်အာရုံများမှာအဘယ်ကြောင့်များအတွက် key ကိုအကြောင်းပြချက်အကျဉ်းချုပ်။ အများအပြားကအာဏာပိုင်များနှင့်အခြားအော်ပရေတာအစဉ်မပြတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍတွင်ဤကိစ္စများအတူတူ, လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများ, နှင့်ဗဟိုရီနာကှငျးအဖြစ်ကျောင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
စားပွဲတင် 1 ။ SRHR များအတွက်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များနှင့်ပစ်မှတ်။
3 ။ ကောင်းသောကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေး 3.1 မိခင်သေဆုံးနှုန်းကိုလျှော့ချ
3.2 အသက်အရွယ်5အောက်၌ရှိသမျှသောကာကွယ်နိုင်သောသေဆုံးမှုရပ်တန့်။
3.3 အားဖြင့် 2030, AIDS ရောဂါ၏ရောဂါအဆုံးသတ်, တီဘီ, ငှက်ဖျား, နှင့်အပူပိုင်းရောဂါနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးအသည်းရောင်အသားဝါဘီ, ရေ-ဘွားမြင်သောရောဂါများနှင့်အခြားကူးစက်နိုင်သောအနာရောဂါများလျစ်လျူရှု။
3.7 အားဖြင့် 2030, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်လောကလုံး access ကိုသေချာစေရန် - နှင့်အမျိုးသားပြန်လည်မဟာဗျူဟာများနှင့်အစီအစဉ်များသို့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးများ၏ပေါင်းစည်းမှု - မိသားစုစီမံကိန်း, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပညာရေးအပါအဝငျ။
5 ။ ကျားမတန်းတူညီမျှမှု 5.1 နေရာတိုင်းအားလုံးအမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံအားလုံးကိုရပ်တန့်။
5.3 အစောပိုင်း, ထိုကဲ့သို့သောကလေးကအဖြစ်အားလုံးအန္တရာယ်ရှိသောအလေ့အကျင့်, ရှင်းလင်းနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်မှုရသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုကျန်းမာရေးနှင့်မျိုးပွားမှုအခွင့်အရေးတစ်လောကလုံး access ကိုအာမခံ 5.6 ။
10 ။ လျှော့ချမညီမျှမှုများ တန်းတူအခွင့်အလမ်းရှိစေရန်နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးအတွက်ဖွငျ့အပါအဝင်ရလဒ်ကို၏မညီမျှမှုကိုလျှော့ချ 10.3 ။
အဆိုပါလူဦးရေ-based စစ်တမ်း SRHR2017 စာရင်းအင်းဆွီဒင်နှင့်Enkätfabriken AB နှင့်အတူပူးပေါင်းအတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကဆောင်ရွက်ခဲ့ဆှီဒငျယေဘုယျလူဦးရေအကြားတွင်စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုယေဘုယျနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်မေးခွန်းများ, လိင်နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံများကို, လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေး, အင်တာနက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာသာလဲလှယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအတွက်ငွေပေးချေမှုပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်, SRHR2017 ၏အတိုင်းအတာ 1996 ကနေ "ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်လိင်" ၏ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်အများကြီးကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ SRHR2017 လေ့လာမှုစတော့ဟုမ်း (2017 / 1011-31 /5Dnr) ​​အတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုစုစုပေါင်းလူဦးရေမှတ်ပုံတင်ထံမှအကူအညီနှင့်အတူ 50,000 တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး stratified နမူနာမေးလ်ကစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် 31 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကျောင်းထွက်မှုနှုန်းနိမ့်ပညာရေးနှင့်ဆွီဒင်ပြင်ပတွင်မွေးဖွားသောသူတို့တှငျလူတို့တွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ ကျောင်းထွက်၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. ယေဘုယျစစ်တမ်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားပေမယ့်လိင်နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်. အခြားအစစ်တမ်းများဆင်တူခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Non-တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိဖို့စံကိုက်ညှိလေးကိုသုံးခြင်းနှင့်စုစုပေါင်းလူဦးရေမှအခြဆွဲနိုင်စေဖို့။ သို့သော်ရလဒ်ဂရုတစိုက်အနက်ရပါမည်။ SRHR2017 ဆွီဒင် SRHR ပေါ်ပထမဦးဆုံးလူဦးရေ-based လေ့လာမှုဖြစ်ပြီး, ရလဒ်လိင်, အသက်-အုပ်စု, ပညာရေးအဆငျ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် trans ဆိုတဲ့လူများအတွက်အချို့ကိစ္စများတွင်အားဖြင့်တင်ဆက်ထားပါသည်။
ထို့အပြင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ Novus Sverigepanel ကနေခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2018 ဖြေဆိုသူအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ 12,000 ၏ကျဆုံးခြင်းစဉ်အတွင်းဝဘ်စစ်တမ်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် panel ကိုကျပန်းကွဲပြားခြားနားသောစစ်တမ်းများအဘို့ရှေးခယျြထားကြသူ 44,000 တစ်ဦးချင်းစီပါရှိသည်။ Novus အဆိုအရ၎င်းတို့၏ panel ကအသက်-bracket က 18-79 အတွင်းလိင်, အသက်အရွယ်, နှင့်ဒေသနှင့် ပတ်သက်. ဆွီဒင်လူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ panel ကိုစစ်တမ်းများမကြာခဏ 55-60 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုရောက်ရှိ, ငါတို့စစ်တမ်း 60.2 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးတုန့်ပြန်မှုနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ဆွီဒင်၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီအားဖြင့်အစီရင်ခံစာ "Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa" ကြည့်ပါ။